जहाँ अनलाइन डाटा खरिद गर्न एक छाक खाना छाड्नुपर्छ ! - Birgunj Sanjalजहाँ अनलाइन डाटा खरिद गर्न एक छाक खाना छाड्नुपर्छ ! - Birgunj Sanjalजहाँ अनलाइन डाटा खरिद गर्न एक छाक खाना छाड्नुपर्छ ! - Birgunj Sanjal
१० मंसिर २०७६, मंगलवार ०५:२५
बीबीसी । मध्य अफ्रिकास्थित कंगोको विश्वविद्यालयमा पढ्ने एक विद्यार्थीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “मलाई भोक लागिरहेको थियो । त्यसैले म त्यस दिन द्विविधामा परेँ, खाना खाऊँ या २४–घण्टे अनलाइन डाटा खरिद गरौँ ?”
यसबीच मार्च र अक्टोबरमा युवाहरुले ‘ल लुचा’ नामक एक विरोधको अभियान सुरु गरेका हुन् जसपछि सरकार यस मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न दबाबमा आइरहेको बताइएको छ । सरकारले निजी कम्पनीहरुले आफ्ना नागरिकहरु ठगिएको हेरेर बस्नुको सट्टा केही कदम उठाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको चाहाना रहेको बिएनभेनु मातुमो बताउँछन् जो पनि यस अभियानमा सहभागी छन् । विद्यार्थीहरु मात्र नभएर त्यहाँका अरु अनलाइन व्यवसायीहरु पनि महङ्गो इन्टरनेटको मारमा छन् । बीबीसीबाट